Kitra – Lalao firahalahiana: tsy mifanara-tsaina ny FMF sy i Nicolas Dupuis | NewsMada
Kitra – Lalao firahalahiana: tsy mifanara-tsaina ny FMF sy i Nicolas Dupuis
Mifanenjana i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar, sy ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) ny amin’izay ho ekipa hanaovana lalao firahalahiana. Samy manana ny heviny ny roa tonta.
Mananontanona ny mety ho fahasimbana sy ny fahapotehana indray eo amin’ny baolina kitra malagasy. Mitranga mantsy ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) sy i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar, ny amin’izay ekipa hanaovana lalao firahalahiana, hanomanana ny fihaonana mandroso sy miverina amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, eo amin’ny fiadian-toerana ho an’ny “Can 2021”. Samy manana ny ekipa eritreretiny hiatrehana izany mantsy ny andaniny sy ny ankilany. Miezaka sy misisika mafy hanaovana lalao firahalahiana amin’ny klioba D1 ao Luxembourg mantsy ingahy mpanazatra raha ny vaovao voaray. Mitsipaka marindrano izany kosa ny komity mpitantana eo anivon’ny FMF, izay efa nifampiraharaha tamin’ny Etalons-n’i Borkina Faso. Nohamafisin’ny tomponandraikitra iray ao amin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra fa izy ireo no niresaka mivantana tamin’i Borkina Faso ary nanao ny fifanarahana rehetra fa tsy i Nicolas Dupuis velively.
Efa nanaiky ry zareo Borkinabe ny amin’io lalao io ary tsy mitaky na inona na inona fa ifampizarana ny fikarakarana ny lalao. Hatao any Lisbonne, Portugal, izany, raha raikitra satria tsy azo anatanterahana fihaonana ho an’ny ekipam-pirenena ao Frantsa.
Niteraka resabe izany omaly ka nahatonga an’i Nicolas Dupuis nanao fanambarana ao amin’ny tambajotran-tserasera nilaza fa efa niresaka tamin’i Borkina Faso ihany koa ny tenany ary efa nandefa taratasy any amin’ny FMF, nampahafantatra izany, ka eo am-piandrasana ny valin-tenin’ity rafitra miahy ny baolina kitra malagasy ity izy. Marihina fa eo anelanelan’ny 9 – 14 oktobra, izay datin’ny Fifa, ny hanaovana io lalao firahalahiana io.